khabarmuluk.com | Trusted Online News Protal in Nepal चितवनमा ट्रक र कार ठक्कर खाँदा २ जनाको मृत्यु – khabarmuluk.com
चितवनमा ट्रक र कार ठक्कर खाँदा २ जनाको मृत्यु
चितवन । चितवनमा ट्रक र कार एक आपसमा ठक्कर खाँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
आज दिउसो साँढे ४ बजेतिर भरतपुर २९ मुग्लिन नारायणगढ सडक खण्डको दासढुङगामा ट्रक र कार ठोक्किएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार मृत्यु हुनेहरुमा तनँहु जिल्ला स्याम्घा ४ बस्ने बर्ष २८ का धर्म राज गौली र कास्की जिल्ला लेखनाथ नगरपालिका बस्ने बर्ष ३१ का रामकृष्ण भुजेल रहेका छन् ।
नारायणगढबाट मुग्लिङतर्फ जाँदै गरेको ना. ६ ख ७३७१ नम्बरको आईचर ट्रक र बिपरित दिसाबाट आई रहेको बा २१ च ६८५९ नम्बरको कार एक आपसमा ठक्कर खाएको हो । दुर्घटनापछि कारमा सवार चालक सहित ५ जना घाईते भई उपचारको लागी पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर तर्फ ल्याउदै गर्दा २ जनाको बाटोमा नै मृत्यु भएको थियो भने २ जना को अबस्था गम्भीर रहेको छ ।
गम्भीर घाइतेहरु कार चालक जिल्ला लम्जुङ मध्यनेपाल नगरपालिका ७ बस्ने बर्ष ४२ को पदम सापकोटा र जिल्ला स्याङजा बिरुवा गाउँपालिका ३ बस्ने बर्ष ४२ को प्रसाद थापाको र मध्यम अवस्था रहेका तनहुं ब्यास न.पा. ६ बस्ने बर्ष ४० को जसमान परियारको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भई रहको छ ।
दुबै सवारी साधन र ट्रक चालक नियन्त्रणमा रहेको चितवन प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।